Rosia: Toro-lalana Ho An’ny Mpiserasera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Jolay 2017 17:46 GMT
Faran'ny Herinandro feno hetsika izao.
Tao Minsk, Belarus, tsy maintsy nampiasaina tamin'ireo olom-pirenena an'arivony maro manohitra ny fitondrana Aleksandr Lukashenko ny tafondron-drano. Tao Nizhniy Novgorod, Rosia, polisy sy miaramila teo amin'ny 20.000 no nanakana ny “Diaben'ireo Mpanohitra” tsy hotontosa indray. Tao Moskoa, na izany aza, polisy 3.000 misahana ny rotaka no nantsoina hiandry ireo mpanohana an'i Kremlin miisa 15.000 izay mpikambana ao amin'ny Nashi nandritra ny fankalazan'izy ireo ny fahafito taona nitondran'i Vladimir Putin tao Rosia.
Nahazo ny bokikely Nashi ilay tompon'ny Gallery, Marat Guelman (mpisera LJ galerista) – ary tahaka izao no heviny momba izany:
[…] Mahatsiaro mialona kely an'i [Eduard Limonov] aho. Misy vidiny lafo ny fananana mpampiely hevitra vonona tahaka izany [tahaka ny Nashi].
Amin'ny ankapobeny, azo heverina ho mpanorina karazana vaovao ny Nashi. Mitovy amin'ny torolalana ho an'ny mpampiasa bokikely. Ho an'ny fitaovana tena tsotra loatra (tahaka ny kanonta). Teny vitsy monja, saingy miverimberina isaky ny pejy:
fasista: hitler sy limonov
mpamadika: [Andrei Vlasov, Jeneraly Sovietika izay niara-niasa tamin'ny Nazi Alemana nandritra ny Ady Lehibe Faha-2] sy [Mikhail Kasyanov, Praiminisitra ao Rosia nanomboka ny taona 2000 hatramin'ny 2004, izay mpiara-dia akaiky amin'i Garry Kasparov ankehitriny]
fahavalo: amerika sy ny liberaly
niharam-boina: saddam hussein sy ny vahoaka rosiana
namana: Putin sy Putin rahampitso